Isaziso sezomthetho | Iforamu Yeselula
Movilforum.com kungokwenethiwekhi yengosi Ibhulogi yezindaba, inkampani ephethwe Amanethiwekhi we-AB Internet 2008 SL, CIF: B85537785, nekheli ku:
Amamodeli, amafomu nolwazi oluthe xaxa ngamalungelo akho: Iwebhusayithi esemthethweni ye-Spanish Agency for Data Protection Ithuba lokuhoxisa imvume: Uma kwenzeka unikeze imvume nganoma iyiphi injongo ethile, unelungelo lokuyikhipha nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kokuthinta ukuba semthethweni kokwelashwa okususelwa kwimvume ngaphambi kokuhoxiswa kwayo. Ungakhalaza kanjani kwi-Control Authority: Uma ucabanga ukuthi kunenkinga ngendlela i-AB Internet Networks 2008 SL ephatha ngayo idatha yakho, ungabhekisa izimangalo zakho kuMphathi Wezokuphepha we-AB Internet Networks 2008 SL (ekhonjiswe ngenhla) noma ku igunya lokuvikela idatha okuhambelana, kube yi I-ejensi yaseSpain Yokuvikelwa Kwemininingwane, le eboniswe endabeni yeSpain.
Idatha ehlukanisiwe: Imininingwane ehlukanisiwe izogcinwa ngaphandle kwesikhathi sokususa. Imininingwane yababhalisile kokuphakelayo nge-imeyili: Kusukela lapho umsebenzisi abhalisela khona aze azikhiphe ohlwini. Imininingwane yababhalisile kwi-newsletter: Kusukela lapho umsebenzisi abhalisela khona aze azikhiphe ohlwini. Idatha yomsebenzisi efakwe yi-AB Internet Networks 2008 SL kumakhasi namaphrofayli kumanethiwekhi omphakathi: Kusukela lapho umsebenzisi enikeza imvume yakhe baze bayikhiphe.
I-AB Internet Networks 2008 SL izinikele ekusetshenzisweni kwedatha, ukuze bahloniphe imfihlo yabo nokuzisebenzisa ngokuhambisana nenhloso yazo, kanye nokuthobela isibopho sabo sokuzigcina futhi zivumelanise zonke izindlela ukugwema ukuguqulwa, ukulahleka, ukwelashwa noma ukufinyelela okungagunyaziwe, ngokuya ngemibandela yeRoyal Decree 1720/2007 kaDisemba 21 , evuma iMithethonqubo yokuthuthukiswa kwe-Organic Law 15/1999 yangoDisemba 13, ekuVikeleni Kwemininingwane Yomuntu. Uqinisekisa ukuthi idatha yomuntu siqu enikezwe ngamafomu iyiqiniso, ubophezelekile ukuxhumana nanoma iluphi ushintsho kubo. Ngokufanayo, uqinisekisa ukuthi yonke imininingwane enikeziwe iyahambelana nesimo sakho sangempela, ukuthi sisesikhathini futhi sinembile. Ngaphezu kwalokho, kufanele ugcine idatha yakho ivuselelwa ngaso sonke isikhathi, ubhekele kuphela ukunganembi noma ukuqamba amanga kwedatha enikeziwe kanye nomonakalo ongabangelwa yilokhu ku-AB Internet Networks 2008 SL njengomnikazi wale webhusayithi, noma abantu besithathu ngenxa yokusebenzisa okushiwo.
I-AB Internet Networks 2008 SL isebenzisa izindlela zokuphepha ezenele ukuthola ukuthi akhona yini amagciwane, ukuhlaselwa ngamandla kanye nokujova ngamakhodi. Kodwa-ke, kufanele wazi ukuthi izindlela zokuphepha zezinhlelo zamakhompiyutha kwi-Intanethi azithembeki ngokuphelele nokuthi, ngakho-ke, i-AB Internet Networks 2008 SL ayinakuqinisekisa ukungabikho kwamagciwane noma ezinye izinto ezingadala ushintsho ezinhlelweni zamakhompiyutha. i-Hardware) yoMsebenzisi noma kumadokhumenti abo kagesi namafayela aqukethwe kuwo. Ngaphandle kwalokhu, ukuzama kuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo bemininingwane yakho yomuntu siqu, iwebsite inohlelo olusebenzayo lokuqapha ezokuphepha olubika ngomsebenzi ngamunye womsebenzisi kanye nokwephula okungenzeka ekuphepheni kwedatha yomsebenzisi. Uma kwenzeka ithola noma yikuphi ukwephulwa, i-AB Internet Networks 2008 SL ithembisa uku yazisa abasebenzisi kungakapheli isikhathi esingamahora angama-72.
Yonke imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa kuwebhusayithi zibhekisa kumafomu wokuxhumana, amafomu okuphawula kanye namafomu wokubhaliswa komsebenzisi, okubhaliselwe kwencwadi yezindaba kanye / noma ama-oda wokuthenga. Le webhusayithi ihlala idinga imvume yangaphambilini yabasebenzisi ukucubungula idatha yabo yomuntu ngezinhloso ezibonisiwe. Unelungelo lokuhoxisa imvume yakho yangaphambilini nganoma yisiphi isikhathi.
Iwebhu nokusingathwa: Le webhusayithi ine-encryption ye-SSL TLS v.1.2 evumela ukuthunyelwa okuphephile kwedatha yomuntu siqu ngamafomu wokuxhumana ajwayelekile, aphethwe kumaseva i-AB Internet Networks 2008 SL eyenze kusuka kuma-Occentus Networks. Idatha eqoqwe kuwebhu: Imininingwane yomuntu eqoqiwe izoba ngaphansi kokucutshungulwa okuzenzakalelayo futhi ifakwe kumafayela ahambisanayo aphethwe yi-AB Internet Networks 2008 SL.
Ifomu Lempendulo: Kuwebhu kunethuba lokuthi abasebenzisi bashiye imibono ezincwadini zesiza. Kukhona ikhukhi eligcina imininingwane enikezwe ngumsebenzisi ukuze angaphinde ayifake ekuvakasheni okusha ngakunye futhi nekheli le-imeyili, igama, iwebhusayithi nekheli le-IP liqoqwa ngaphakathi. Imininingwane igcinwa kumaseva we-Occentus Networks. Ukubhaliswa Komsebenzisi: Azivunyelwe ngaphandle kokuthi kucelwe ngokucacile. Ifomu lokuthenga: Ukufinyelela kumikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa ezitolo zethu eziku-inthanethi, umsebenzisi unefomu lokuthenga ngokuya ngemibandela yenkontileka ebalulwe kunqubomgomo yethu lapho ulwazi lokuxhumana nolokukhokha luzodingeka khona. Imininingwane igcinwa kumaseva we-Occentus Networks. Siqoqa imininingwane ngawe ngesikhathi senqubo yokuphuma esitolo sethu. Lolu lwazi lungafaka, hhayi lokhu kuphela, igama lakho, ikheli, i-imeyili, ucingo, imininingwane yokukhokha nokunye okudingekayo ukucubungula ama-oda akho. Ukuphathwa kwale datha kusivumela ukuthi:
Amafomu okubhaliswa kwencwajanaI-AB Internet Networks 2008 SL isebenzisa i-Sendgrid, Feedburner noma i-Mailchimp newsletter service service, egcina imininingwane yakho ye-imeyili, igama nokwamukelwa kokubhalisile. Ungazikhipha ohlwini lwencwadi yezindaba nganoma yisiphi isikhathi ngesixhumanisi esithile esisezansi kwempahla ngayinye oyitholayo Imeyili: Umhlinzeki wesevisi yethu ye-imeyili u-Sendgrid. Imiyalezo esheshayo: I-AB Internet Networks 2008 SL ayinikezeli ngesevisi ngemiyalezo esheshayo, njenge-WhatsApp, Facebook Messenger noma i-Line. Abahlinzeki bezinsizakalo zokukhokha: Ngewebhu, ungafinyelela, ngokusebenzisa izixhumanisi, kumawebhusayithi wezinkampani zangaphandle, njenge PayPal o I-Stripe, ukwenza izinkokhelo ngezinsizakalo ezinikezwa yi-AB Internet Networks 2008 SL. Asikho isikhathi lapho abasebenzi be-AB Internet Networks 2008 SL bekwazi ukufinyelela emininingwaneni yasebhange (isibonelo, inombolo yekhadi lesikweletu) oyinikeza abantu besithathu abashiwo.
Imibhalo kuwebhu ingafaka okuqukethwe okushumekiwe (isb. Amavidiyo, izithombe, izindatshana, njll.). Okuqukethwe okushumekwe kwamanye amawebhusayithi kuziphatha ngendlela efanayo nokuthi isivakashi sivakashele enye iwebhusayithi. Lawa mawebhusayithi angaqoqa idatha emayelana nawe, asebenzise amakhukhi, ashumeke ukulandela ngomkhondo komuntu wesithathu, futhi aqaphe ukuxhumana kwakho nokuqukethwe okushumekiwe, kufaka phakathi ukulandelela ukuxhumana kwakho nokuqukethwe okushumekiwe uma une-akhawunti noma uxhumekile kuleyo webhusayithi. Eminye imisebenzi: Izinsizakalo ezithile ezinikezwa ngewebhusayithi zingaqukatha imibandela ethile enezinhlinzeko ezithile maqondana nokuvikelwa kwemininingwane yomuntu siqu. Kubalulekile ukuthi uyifunde futhi uyamukele ngaphambi kokucela insizakalo okukhulunywa ngayo. Inhloso nokusemthethweni: Inhloso yokucubungula le datha kuzoba ukukunikeza kuphela imininingwane noma amasevisi owacela kithi.
Ubukhona kumanethiwekhi: I-AB Internet Networks 2008 SL inamaphrofayli kwamanye amanethiwekhi amakhulu okuxhumana nabantu kwi-Intanethi. Inhloso nokusemthethweni: Ukwelashwa okuzokwenziwa yi-AB Internet Networks 2008 SL nemininingwane engaphakathi kwalezi zinethiwekhi ezibalwe ngenhla kuzoba, ikakhulukazi, okuvunyelwa yinethiwekhi yokuxhumana nabantu kumaphrofayili ezinkampani. Ngakho-ke, i-AB Internet Networks 2008 SL ingazisa, lapho umthetho ungakuvimbeli, abalandeli bayo nganoma iyiphi indlela ukuthi inethiwekhi yezokuxhumana ivumela ngemisebenzi yayo, izethulo, okunikezwayo, kanye nokuhlinzeka ngamakhasimende uqobo. Ukukhishwa kwedatha: Akunasimo i-AB Internet Networks 2008 SL ezokhipha idatha kumanethiwekhi okuxhumana nomphakathi, ngaphandle uma imvume yomsebenzisi itholwe ngqo nangokusobala ukwenza lokho. Amalungelo: Lapho, ngenxa yemvelo yokuxhumana nabantu, ukusetshenziswa ngempumelelo kwamalungelo wokuvikela idatha womlandeli kuncike ekuguqulweni kwephrofayili yomuntu siqu yalokhu, i-AB Internet Networks 2008 SL izokusiza futhi ikweluleke kuze kube sekugcineni yamathuba ayo.
I-imeyili. Isevisi ye-imeyili ye-AB Internet Networks 2008 SL inikezwa kusetshenziswa amasevisi we-Sendgrid. Amanethiwekhi omphakathi. I-AB Internet Networks 2008 SL isebenzisa amanethiwekhi omphakathi aseMelika i-YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, i-Flipboard okwenziwa kuyo ukudluliswa kwedatha okwenziwa kwamanye amazwe, okuhlaziyayo nobuchwepheshe maqondana newebhusayithi ekuseva yayo ukuthi i-AB Internet Networks 2008 SL iphatha imininingwane, esebenzisa bona, abasebenzisi, ababhalisile noma amatilosi abaletha ku-AB Internet Networks 2008 SL noma abelana ngayo nayo. Abahlinzeki bezinkokhelo. Ukuze ukwazi ukukhokha ngokusebenzisa PayPal o I-Stripe, AB Internet Networks 2008 SL izothumela imininingwane edingekile yalabo kulaba bacubungula ukukhokha ukukhishwa kwesicelo sokukhokha esihambelanayo. Imininingwane yakho ivikelwe ngokwenqubomgomo yethu yobumfihlo namakhukhi. Ngokwenza kusebenze okubhalisile noma ngokunikela ngemininingwane yakho yokukhokha, uyaqonda futhi wamukela inqubomgomo yethu yobumfihlo namakhukhi. Uzohlala unelungelo lokufinyelela, ukulungiswa kabusha, ukususwa, ukukhawulelwa, ukuthwala nokukhohlwa idatha yakho. Kusukela lapho ubhalisa njengomsebenzisi kule webhusayithi, i-AB Internet Networks 2008 SL inokufinyelela ku: Igama lomsebenzisi ne-imeyili, ikheli le-IP, ikheli leposi, i-ID / i-CIF nolwazi lokukhokha. Kunoma ikuphi, i-AB Internet Networks 2008 SL inelungelo lokuguqula, nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini, kodwa ukwazisa, ukwethulwa nokulungiswa kwewebhusayithi njengalesi saziso somthetho.
Ukutholakala kanye / noma ukusetshenziswa kwale webhusayithi kuchaza noma ngubani owenza isimo somsebenzisi, ukwamukela, kusukela kulo mzuzu, ngokugcwele nangaphandle kokubhuka, lesi saziso somthetho maqondana nezinsizakalo ezithile nokuqukethwe yiwebhusayithi. Lapho usebenzisa le webhusayithi, umsebenzisi uyavuma ukungayenzi imikhuba engalimaza isithombe, izintshisekelo namalungelo e-AB Internet Networks 2008 SL noma abantu besithathu noma okungalimaza, kukhubaze noma kugcwalise ngokweqile ingosi noma kuvimbele, noma kunjalo, ukusetshenziswa okuvamile kwewebhu.
Isayithi iqukethe imibhalo elungiselelwe izinjongo ezifundisayo noma ezifundisayo ezingase zingakhombisi isimo samanje somthetho noma umthetho wezomthetho futhi ezibhekisa ezimweni ezijwayelekile ukuze okuqukethwe kwaso kungaze kusetshenziswe ngumsebenzisi ezimweni ezithile. Imibono evezwe kuzo ayikhombisi neze imibono ye-AB Internet Networks 2008 SL. Okuqukethwe izindatshana ezishicilelwe kusayithi akunakubhekwa, kunoma yikuphi, esikhundleni sezeluleko zezomthetho. Umsebenzisi akumele enze ngokusekelwe kolwazi oluqukethwe kusayithi ngaphandle kokusebenzisa izeluleko zochwepheshe ezihambisanayo.
Ngalezi Zimo Ezijwayelekile, awekho amalungelo empahla yengqondo noma yezimboni adluliselwa kwingosi noma kunoma yiziphi izinto zayo, ukukhiqizwa kabusha, ukuguqulwa, ukusatshalaliswa, ukuxhumana komphakathi, okwenza kutholakale emphakathini, ukukhipha, ukusetshenziswa kabusha, ukuvinjelwa ngokusobala Ukudlulisa noma ukusebenzisa kwanoma yiluphi uhlobo, nganoma iyiphi indlela noma inqubo, yanoma iyiphi yazo, ngaphandle kwalapho kuvunyelwe ngokomthetho noma kugunyazwa ngumnikazi wamalungelo ahambisanayo. Umsebenzisi uyazi futhi wamukela ukuthi yonke iwebhusayithi, equkethe ngaphandle kokulingiswa okuphelele umbhalo, izithombe, ukwakheka, isoftware, okuqukethwe (kufaka phakathi ukwakheka, ukukhethwa, ukuhlelwa nokwethulwa okufanayo), izinto ezilalelwayo ezibukwayo kanye nemidwebo, kuvikelwe yizimpawu zokuhweba, amalungelo okushicilela kanye amanye amalungelo asemthethweni abhalisiwe, ngokuya ngezivumelwano zamazwe omhlaba lapho iSpain iyiqembu namanye amalungelo empahla nemithetho yaseSpain. Uma kwenzeka umsebenzisi noma umuntu wesithathu abheka ukuthi kube nokwephulwa kwamalungelo abo asemthethweni okuvikela ubunikazi bokusungula ngenxa yokwethulwa kokuqukethwe okuthile kusayithi, kumele bazise i-AB Internet Networks 2008 SL ngalesi simo, okukhombisa:
Izimo zamanje zokusetshenziswa kwaleli sayithi zilawulwa ngandlela thize ngomthetho waseSpain. Ulimi lokubhalwa nokuchazwa kwalesi saziso esisemthethweni yiSpanish. Lesi saziso somthetho ngeke sifakwe kumsebenzisi ngamunye kepha sizohlala sitholakala nge-inthanethi kuwebhu. Abasebenzisi bangathumela kuHlelo Lokulamula Abathengi i-AB Internet Networks 2008 SL ezoba yingxenye yokuxazulula noma yikuphi ukuphikisana noma isimangalo esivela kulo mbhalo noma kunoma yimuphi umsebenzi we-AB Internet Networks 2008 SL, ngaphandle kokuxazulula lezo zingxabano ezidala ukuthuthukiswa umsebenzi odinga ubulungu, lapho umsebenzisi kufanele aye kunhlangano ehambisanayo yenhlangano efanelekile yamabha. Abasebenzisi abanesimo sabathengi noma sabasebenzisi njengoba kuchazwe yimithetho yaseSpain futhi bahlala e-European Union, uma bebe nenkinga ngokuthengwa oku-inthanethi okwenziwe ku-AB Internet Networks 2008 SL, ukuzama ukufinyelela esivumelwaneni esingaphandle kwenkantolo ungaya ku- Ipulatifomu Yokuxazulula Izingxabano E-inthanethi, eyakhiwe yi-European Union futhi yathuthukiswa yi-European Commission ngaphansi kwe Umthethonqubo (EU) 524/2013. Kuncike ekutheni umsebenzisi akayena umthengi noma umsebenzisi, futhi uma kungekho mthetho odinga okuhlukile, amaqembu avumelana ukuletha ezinkantolo naseNkantolo yeMantshi yaseMadrid, njengoba lena kuyindawo yokuphetha inkontileka, ishiya omunye nomunye ngokusobala amandla angahambelana nawo.
Ukutholakala kanye / noma ukusetshenziswa kwalokhu kunoma ngubani owenza isimo soMsebenzisi, ukwamukela, kusuka kulo mzuzu, ngokugcwele nangaphandle kokubhuka, lesi saziso somthetho, kanye nemibandela ethile, lapho kufanele khona, iyayigcwalisa, ngokuhlobana nezinsizakalo ezithile nokuqukethwe yingosi. Umsebenzisi uyaziswa, futhi uyakwamukela, ukuthi ukufinyelela kule webhusayithi akusho, nganoma iyiphi indlela, ukuqala kobudlelwano bezohwebo ne-AB Internet Networks 2008 SL. Ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, izinsizakalo zayo nokuqukethwe ngaphandle kokwephula umthetho wamanje, ukuthembeka nokuhleleka komphakathi. Ukusetshenziswa kwewebhusayithi ngezinhloso ezingekho emthethweni noma eziyingozi, noma lokho, nganoma iyiphi indlela, kungadala ukulimala noma kuphazamise ukusebenza okujwayelekile kwewebhusayithi akuvunyelwe. Mayelana nokuqukethwe yile webhusayithi, akuvunyelwe:
Amakhasi ewebhusayithi ahlinzeka izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi nokuqukethwe okungokwabantu besithathu, abakhiqizi noma abahlinzeki. Inhloso yodwa yezixhumanisi ukuhlinzeka uMsebenzisi ngamathuba okufinyelela izixhumanisi ezishiwo nokwazi imikhiqizo yethu, yize i-AB Internet Networks 2008 SL ingenacala kunoma yimiphi imiphumela engahle itholakale kumsebenzisi ngokuthola izixhumanisi ezishiwoyo. Umsebenzisi ohlose ukusungula noma iyiphi idivayisi yokuxhumanisa ezobuchwepheshe kusuka kuwebhusayithi yakhe iye engosini kumele athole imvume ebhaliwe ngaphambilini ye-AB Internet Networks 2008 SL. Ukusungulwa kwesixhumanisi akusho ukuthi kunoma ikuphi ukubakhona kobudlelwano phakathi kwe-AB Internet Networks 2008 SL nomnikazi wesayithi lapho isixhumanisi sisungulwe khona, noma ukwamukelwa noma ukwamukelwa yi-AB Internet Networks 2008 SL kokuqukethwe noma amasevisi.
Umsebenzi we ukumaketha kabusha noma kwizithameli ezifanayo ze-AdWords zisivumela ukuthi sifinyelele kubantu abake bavakashela iwebhusayithi yethu ngaphambilini futhi sibasize baqedele inqubo yabo yokuthengisa. Njengomsebenzisi, uma ufaka iwebhusayithi yethu, sizofaka ikhukhi lokumaketha kabusha (kungavela kwaGoogle Adwords, Criteo noma ezinye izinsizakalo ezinikezela ukumaketha kabusha).
Umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa i-webhusayithi ngenkuthalo nezinsizakalo ezifinyeleleka kuyo, ngokuhambisana ngokuphelele noMthetho, amasiko amahle nalesi saziso somthetho. Ngokunjalo, yenza, ngaphandle kwalapho kuqala, ukugunyaza okuzwakalayo nokubhaliwe kwe-AB Internet Networks 2008 SL ukusebenzisa imininingwane equkethwe kuwebhusayithi, kuphela imininingwane yakho, ukungakwazi ukwenza ngqo noma ngokungaqondile ukuxhashazwa kokuqukethwe kokuqukethwe ukufinyelela. Leli sayithi ligcina ifayela ledatha elihlobene namazwana athunyelwe kule sayithi. Ungasebenzisa amalungelo akho okufinyelela, ukulungisa, ukukhansela noma ukuphikisa ngokuthumela i-imeyili kukheli oxhumana naye (at) actualityblog (dot) com. Leli sayithi, izizinda ezihambisanayo nobunikazi bokuqukethwe kungokwakwa-AB Internet Networks 2008 SL. Le webhusayithi iqukethe ama-hyperlink aholela kwamanye amawebhusayithi aphethwe ngabantu besithathu abangaphandle kwenhlangano yethu. I-AB Internet Networks 2008 SL ayiqinisekisi futhi ayibophezelekile kokuqukethwe okuqoqwe kumakhasi e-web ashiwo. Ngaphandle kokuthi kugunyazwe okucacile, kwangaphambili nangokubhaliwe okuvela kwa-AB Internet Networks 2008 SL, ukukhiqiza kabusha, ngaphandle kokusetshenziswa kwangasese, ukuguqulwa, futhi ngokujwayelekile noma yiluphi olunye uhlobo lokuxhashazwa, nganoma iyiphi inqubo, yakho konke noma ingxenye yokuqukethwe kwale webhusayithi. Akuvunyelwe nhlobo ukwenza ngaphandle kwemvume ye-AB Internet Networks 2008 SL, noma yikuphi ukukhohlisa noma ukuguqulwa kwale webhusayithi. Ngenxa yalokho, i-AB Internet Networks 2008 SL izothatha noma yimuphi umthwalo otholwayo, noma ongatholwa, ekuguqulweni noma ekuphathweni kwabantu besithathu.
Uma kwenzeka noma yimuphi umsebenzisi enanemibuzo mayelana nalezi zimo zomthetho noma noma yikuphi ukuphawula mayelana ne-portal, sicela uye ku- (at) actualblog (dot) com. Inqubomgomo yethu yobumfihlo ichaza ukuthi siluqoqa kanjani, silugcine noma silusebenzisa kanjani ulwazi esiluqoqayo ngezinsizakalo ezahlukahlukene noma amakhasi atholakala kule sayithi. Kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi yiluphi ulwazi esiluqoqayo nokuthi silusebenzisa kanjani njengoba ukufinyelela kuleli sayithi kusho ukwamukelwa kwenqubomgomo yethu yobumfihlo.